Apple emesịala kpebiri ka ọ taa a nnukwu mmaji nke Android si ahịa na-adọrọ mmasị ha ka ha ma ama sistemụ, iOS. Otú ha bu n'obi na-eme nke a, bụ nnọọ-apụghị ichetụ n'echiche, ma eleghị anya ndị kasị adaba n'ụzọ iji napụ Android apụ ha ahịa. Apple ka a tọhapụrụ ya nnọọ onwe ngwa na Google si play ụlọ ahịa ahụ ga-ekwe ihe gam akporo onye ọrụ na-kpamkpam ịgbanwe ya ma ọ bụ ya Android gadget n'ime ihe iOS gadget. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mmadụ mara banyere nke a ngwa na ihe ha na-amaghị kwa.
Ihe ndị mmadụ mara banyere Ịkwaga iOS
1. Ịkwaga iOS bụ ihe ngwa mere site Apple, pụtara iji tọghata Android ọrụ Apple si iOS, nke n'ihi na ezi a mgbe now a kpọworo dị ka a elu sistemụ.
2. Ịkwaga iOS ga-ekwe ka ndị nke mbụ Android onye ọrụ na-nweta ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị akpali akpali ngwa si Apple si na ngwa ahịa, ụfọdụ na nakwa na e mere site Google play ụlọ ahịa.
3. Ịkwaga iOS ga-ekwe ka ndị ọrụ na-nyefee ha foto, kọntaktị, onye faịlụ, na Google data ha ọhụrụ kere iPhones.
4. Ịkwaga iOS ga-eleghị anya dịkwuo arụmọrụ ke gam akporo igwe nke n'ihi na ozugbo ga kwukwara iOS arụmọrụ dị ka a n'ụzọ kwụ ọtọ menu na mfe igodo.
5. Ịkwaga iOS bụ ihe ikenenke emeso ka Google site Apple, ugbu a na Apple nwere ike iwe oge tupu ịnakwere Google inye otu agbara ngwa na Apple ụlọ ahịa.
Ihe ndị mmadụ na-amaghị banyere Ịkwaga iOS
1. The ngwa nwere ike na-arụnyere mgbe na n'otu Android ngwaọrụ na mgbe ị na-ịgbanwee gaa na iOS si gị gam akporo ngwaọrụ i kpamkpam hapụrụ Android otu.
2. Ịkwaga iOS ga ihu ọma agọnahụ gị ụdị mgbanwe na Android onye ọrụ nwere. Otu n'ime ndị isi ndọghachi azụ maka iOS bụ na ọ na-adịghị ekwe ka ndị ọrụ na-tweak ihe gburugburu dị ka ha na-amasị.
3. The Ịkwaga iOS ga-a arọ igbu on mbụ Android ndị ọrụ ama enwetatụbeghị-eji na-free ngwa ọdịnala na Google ọrụ. Na iOS na gị gadget, ị ga-akwụ maka ọtụtụ ngwa na ọrụ site na Apple ụlọ ahịa.
4. Ugbu a na ngwaike na Android ngwaọrụ gaghị mma mgbe ịmafe iOS, ọtụtụ mkpesa na-atụ anya na-ebilite karịsịa na arụmọrụ mbipụta ebe iOS achọ a ubé mma ngwaike na okwu nke ndụ batrị na ihuenyo ndapụta karịa Android. Cheap gam akporo igwe ga-kasị njọ hit.
5. The nnọọ eziokwu na nke a ngwa adịghị natara a ọma fim online pụtara na ọ bụ bụghị uru a na-agbalị. Otu ihe Google play ụlọ ahịa si Fim bụ na ha adịghị ata ata. Ịkwaga iOS ngwa nwere nkezi fim nke 1.7 nke pụtara na ngwa bụ-adịghị mma.
Nghoputa: kerịta echiche gị na ihe ị na-eche banyere ngwa
Ọ bụla mma ụzọ ịkwaga iOS ngwaọrụ?
Ụzọ kasị mma ịkwaga iOS bụ ịzụta a ọhụrụ iPhone ma ọ bụ iOS akwado ngwaọrụ ka iji kpochapụ ekwe omume nke arụmọrụ mbipụta. Nke a bụ nanị n'ihi na, wụnye iOS na Android ngwaọrụ na-kwesịrị wuru aka Android OS ga-apụta na ngwaọrụ ga eleghị anya nwere adịghị emezi emezi mgbe ejizi sistemụ na-adịghị pụtara n'ihi na ya. Mgbe ịzụ a ọhụrụ iPhone, ọ dịghị mkpa na masịrị si egwu adịkwa gị oku na ndekọ, ederede ozi, music, ngwa, videos, ma ọ bụ ọbụna foto. Wondershare Mobile Trans bụ kacha ngwọta nyefee gị onwe stof si gị ochie Android ekwentị ọhụrụ gị iPhone unaltered. Wondershare Mobile Trans-enye gị ohere nyefee onwe ozi dị ka oku na ndekọ, ederede ozi, kọntaktị, ngwa, na mgbasa ozi faịlụ site gị ochie Android ekwentị ọhụrụ gị iOS ngwaọrụ.
Key atụmatụ nke Wondershare Mobile Trans
Ike ga-eji nyefee onye akwụkwọ dị ka kọntaktị, oku na ndekọ na mgbasa ozi faịlụ gafee otutu ngwaọrụ n'ime nke kasị nso oge o kwere omume.
Na-akwado a dịgasị iche iche nke color, n'elu 2000 ekwentị ụdị.
Kasị dịrị nchebe ụzọ nyefee akwụkwọ gafee igwe ebe ọ bụ na àgwà nnyonye anya ma ọ bụ data ọnwụ ize ndụ.
Olee otú ịkwaga iOS ngwaọrụ ke nzọụkwụ na screenshots.
Lee ndị ole na ole nzọụkwụ na ị ga-agbaso mgbe ebufe onwe gị stof si gị ochie Android ekwentị ọhụrụ gị iOS ngwaọrụ:
1. Run Wondershare Mobile Trans na kọmputa gị na ugwu ma ndị Android ekwentị na iOS ngwaọrụ jidesie kọmputa si USB ọdụ ụgbọ mmiri.
2. Họrọ ekwentị na ekwentị transfer nhọrọ nke dị na mbụ tile nke Wondershare Mobile Trans interface. Mgbe ma ndị igwe na-ahụrụ, jiri tụgharịa nhọrọ na họrọ gị iPhone ka na-aga, na-ezo aka screenshot.
3. Ugbu a, kaa akwụkwọ ị chọrọ nyefee gị iPhone ihe atụ, ederede ozi, media faịlụ, kọntaktị, kalenda, na foto. Mgbe na-ahọpụta nhọrọ na ị pụrụ ịmalite na-edegharị ihe faịlụ. Iṅomi nwere ike nakwa na-ekwu site a dialog igbe na Pop elu na-agwa gị otú nnọọ na-aga.
Olee otú ihichapu data on ochie ngwaọrụ iji chebe onwe onye ọmụma
1. Ugwu ị ochie ngwaọrụ jidesie gị na kọmputa site na USB ọdụ ụgbọ mmiri. Kọmputa ga nwere preinstalled Wondershare Mobile Trans usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndabere gị akwụkwọ, họrọ ndabere nhọrọ na idetuo faịlụ na kọmputa.
2. Ugbu a, gaba azụ ka homepage ma họrọ nhọrọ nke 'Ihichapu gị ochie ekwentị'. Pịa ihichapu Ugbu a bọtịnụ na ala n'aka nri ma họrọ ihe ị chọrọ ka ihichapụ, ma ya ngwa, photos, onwe data, ma ọ bụ usoro ntọala, nakwa dị ka vidiyo na music.
ORF Photo Recovery: Olee naghachi ORF Photos si Canon Digital Igwefoto
A Nzọụkwụ na-nzọụkwụ Guide nke Corsair Flash Iweghachite
> Resource> Naghachi> The Ịkwaga iOS App: Nke a bụ ụzọ kasị mma ịkwaga iOS ngwaọrụ?